ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းနှင့် KP ပညာ – အခါေပး ေဗဒင္
akhapaybaydin 18 Jun 2020 1 Sep 2020 Uncategorized
[gallery ids=”26665,26666,26667,26668″ type=”rectangularေ
KP ဟူးရားဇာတာနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ၁၀-တန္႔ CSL က ရာဟုျဖစ္ၿပီး ၂-တန္႔ (ဝင္ေငြဘာဝ)မွာရပ္ကာ၊ ၁၁-တဘဘာဝ)မွာရပ္တဲ့ အဂၤါၿဂိဳဟ္ပိုင္နကၡတ္ကိုစီးထားၿပီး၊ ၂-တန္႔မွာရပ္တဲ့ ၁-ေႏြSub ကို စီးထားေလေတာ့ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ၿပီြေ
အခုေလာေလာဆယ္ ေသာၾကာဒသာက 28.11.2023 အထိစားေနတယ္။ ေသာၾကာက ၁-တန္႔သခင္ျဖစ္ၿပီး၊ ၁-တန္႔္မွာရပ္ေနတာေၾကာင့္ ဒီကာလအတြင္းဟာ ရုန္းကန္ႀကိဳးစားေနရမယ့္ ကာလျဖစ္တယ္။ ၁၂-တန္႔မွာရပ္တဲ့ ၂-လၤာနကၡတ္ကိုစီးထားလို႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြနဲ႔ ရုန္းကန္ႀကိဳးစားေနရမယ္။
28.11.2023 မွ 28.11.2029 အတြင္း ၁-ေႏြဒသာစားမယ္။ ၁-ေႏြဟာ ၂-တန္႔ (ဝင္ေငြ)ဘာဝမွာရပ္ၿပီး၊ ၁၁-တန္႔ (လာဘ)ဘာဝမွာရပ္ေနတဲ့ အဂၤါၿဂိဳဟ္ပိုင္နကၡတ္ကို စီးထားလို႔ ဒီကာလေရာက္ရင္ေတာ့ ဝင္ေငြအလြန္ေကာင္းၿပီး ဆႏၵေတြျပည့္မွာျဖစ္တယ္။
အေနာက္တိုင္း ပရိုဂရက္ရွင္းစနစ္အရ ေနာက္ ၃-ႏွစ္ေလာက္ေနမွသာ ၁-ေႏြနဲ႔ ၁၀-တန္႔၊ ၁၁-တန္႔သခင္ စေနတို႔ Degree ဒီဂရီ တစ္ထပ္တည္းက်မွာမို႔ ၂၀၂၃ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ပိုမို၍ ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း….
Facebook: Zar Ni
လုပ်ငန်းအောင်မြင်မလားမေးလို့ တားရော့ကဒ်ဆွဲကြည့်လိုက်တာ The World ကမ္ဘာလောကကဒ်ကျတယ်။ အောင်မြင်ကျော်ကြား လူသိများမယ့်သဘော…
KP ဟူးရားဇာတာနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ၁၀-တန့် CSL က ရာဟုဖြစ်ပြီး ၂-တန့် (ဝင်ငွေဘာဝ)မှာရပ်ကာ၊ ၁၁-တန့် (လာဘဘာဝ)မှာရပ်တဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပိုင်နက္ခတ်ကိုစီးထားပြီး၊ ၂-တန့်မှာရပ်တဲ့ ၁-နွေSub ကို စီးထားလေတော့ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ပြီး ဝင်ငွေတိုးပွားမယ်ဆိုတာ ပြနေတယ်…။
အခုလောလောဆယ် သောကြာဒသာက 28.11.2023 အထိစားနေတယ်။ သောကြာက ၁-တန့်သခင်ဖြစ်ပြီး၊ ၁-တန့်မှာရပ်နေတာကြောင့် ဒီကာလအတွင်းဟာ ရုန်းကန်ကြိုးစားနေရမယ့် ကာလဖြစ်တယ်။ ၁၂-တန့်မှာရပ်တဲ့ ၂-င်္လာနက္ခတ်ကိုစီးထားလို့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ ရုန်းကန်ကြိုးစားနေရမယ်။
28.11.2023 မှ 28.11.2029 အတွင်း ၁-နွေဒသာစားမယ်။ ၁-နွေဟာ ၂-တန့် (ဝင်ငွေ)ဘာဝမှာရပ်ပြီး၊ ၁၁-တန့် (လာဘ)ဘာဝမှာရပ်နေတဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပိုင်နက္ခတ်ကို စီးထားလို့ ဒီကာလရောက်ရင်တော့ ဝင်ငွေအလွန်ကောင်းပြီး ဆန္ဒတွေပြည့်မှာဖြစ်တယ်။
အနောက်တိုင်း ပရိုဂရက်ရှင်းစနစ်အရ နောက် ၃-နှစ်လောက်နေမှသာ ၁-နွေနဲ့ ၁၀-တန့်၊ ၁၁-တန့်သခင် စနေတို့ Degree ဒီဂရီ တစ်ထပ်တည်းကျမှာမို့ ၂၀၂၃ နောက်ပိုင်းမှသာ ပိုမို၍ အောင်မြင်ကံကောင်းမည်ဖြစ်ပါကြောင်း….
Previous ⚽One Shot >>>> One Goal.⚽